Imikhiqizo Yokuhlola ye-SARS-CoV-2 IgM / IgG Antibody Test-SARS-CoV-2-Sinocare
I-SARS-CoV-2 IgM / IgG Test Kit Yokuvikela Umzimba
I-SARS-CoV-2 IgM / IgG Antibody Test Kit ingeyekhwalithi ukuthola i-antibody ye-SARS-CoV-2 IgM / IgG ku-serum yomuntu, i-plasma noma isampula yonke yegazi.
Inoveli coronavirus ingeyohlobo lwe- β. I-COVID-19 iyisifo esithathelwanayo sokuphefumula. Abantu bavame ukuthambekela. Njengamanje, iziguli ezitheleleke nge-coronavirus yenoveli zingumthombo oyinhloko wokutheleleka; abantu abangenwe yigciwane bangaba futhi umthombo othathelanayo. Ngokuya ngophenyo lwamanje lwezifo, isikhathi sokufukamela izinsuku ezi-1 kuye kwezingu-14, ikakhulu izinsuku ezi-3 kuye kwezi-7. Ukubonakaliswa okuyinhloko kufaka phakathi umkhuhlane, ukukhathala nokukhwehlela okomile. Ukucinana kwamakhala, ikhala eligobayo, umphimbo obuhlungu, i-myalgia nohudo kutholakala ezimweni ezimbalwa.
l Ukuthola ngokushesha ngaphakathi kwemizuzu engu-15-20
l Ukutholwa okuhlukile kwekhwalithi yama-antibody e-IgM / IgG
l Ukusebenza okulula ngaphandle kwemishini
l Umphumela obonakalayo nokuchazwa okulula
Ukuhlolwa kwegciwane (+)
Ukuhlolwa kwegciwane (-)
Isiguli sisesikhathini sewindi lokuhlolwa kwe-serona coronavirus serological, ama-antibodies athile kumasosha omzimba awakakhiqizwa.
Isiguli kungenzeka asikaze sithole ukutheleleka nge-COVID-19.
Isiguli njengamanje sisezigabeni zokuqala zokutheleleka kwenoveli coronavirus.
Kukhona amathuba amakhulu okuthi ukutheleleka kwenoveli coronavirus kusesigabeni esibucayi. Ngalesi sikhathi, kudingeka kubhekwe ukunemba kwemiphumela yokuhlolwa kwe-nucleic acid, futhi kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi isiguli sinezinye izinhlobo zezifo. Kutholakale amacala amahle noma abuthakathaka e-IgM ezigulini ezibangelwa i-rheumatoid factor.
Iziguli zingaba sezingeni eliphakathi noma eliphambili lokutheleleka nge-coronavirus yenoveli noma ukutheleleka okuphindayo.
Iziguli zingaba nokutheleleka kwangaphambilini kepha sezivele zalulama noma igciwane selisusiwe emzimbeni. I-IgG ekhiqizwa ukuphendula kwamagciwane igcinwa isikhathi eside futhi ingatholwa kusampula yegazi.
Isiguli sisesigabeni esisebenzayo sokutheleleka ngegciwane, kepha umzimba womuntu usungule ukuzivikela ku-coronavirus yenoveli.
Isiguli sisanda kutheleleka nge-coronavirus yenoveli, kanti umzimba njengamanje usesigabeni sokululama, kepha leli gciwane lisusiwe emzimbeni kanti ne-antibody ye-IgM ayikaze yehliswe kuze kufike kumkhawulo wokutholwa; noma ukuhlolwa kwe-nucleic acid kungaba nomphumela ongemuhle ongemuhle kanti isiguli empeleni sisesigabeni sokutheleleka esisebenzayo.